China Ufo High Bay Lighting China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ufo High Bay Lighting - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ufo High Bay Lighting)
2019 ufo ada ìhè 100w 5000k 13000lm
2019 ufo ada ìhè 100w 5000k 13000lm 1. Ufo ọkụ ọkụ 100W na-eji ebe obibi, ụlọ nkwakọba ihe, Ogige ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. duru ufo elu akwa ngwongwu bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo oge na-adịgide adịgide....
277VAC 5000K 100W UFO High Bay Lighting 1. 5000K 100W ufo na-eme ka ọkụ na -ejikarị eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ogige ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Ufo elu ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọhụrụ. Obere na ibu na ibu, ogologo oge...
200W UFO Diana Elu Mmiri Elu na nko
200W UFO Diana Elu Osimiri Ukwu na Eko 1. 200W UFO High Bay Lighting ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. 5000k ụlọ ọrụ na-eduzi ọkụ bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na...
200W UFO nnukwu ọdọ mmiri ìhè ulo oru
200W UFO nnukwu ọdọ mmiri ìhè ulo oru 1. 200W UFO High Bay Lighting ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. UFO ìhè dị elu bụ ọhụụ ọhụrụ. Obere na ibu na ibu, ogologo oge...
200W UFO UFO NDỤKWU NDỊ BỤ UL DAY
1. 200W UFO High Bay Lighting ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. na-eme ka ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ gị dị ọhụrụ. Obere na ibu na ibu, ogologo oge na-adịgide adịgide. 4.Die-cast...
200W Ebube Motion UFO High Bay Lighting
200W Ebube Motion UFO High Bay Lighting 1. Ebube UFO High Bay Lighting ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. UFO mere ka ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ dị iche iche dị ọhụrụ. Obere na ibu na...
150W UFO High Bay Lighting 110V / 220V 1. 5000K 150W ufo mere ka ọkụ na -ejikarị eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ogige ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. 150W ufo ìhè na nko elu IP65 waterproof maka n'èzí eji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. LED High Bay Light 150W bụ ọhụụ mara mma. Obere na ibu na...
100W UFO High Bay Lighting 110V 1. 5000K 100W ufo na-eme ka ọkụ na -ejikarị eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ogige ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. 100W Ufo elu mmiri ọkụ IP65 waterproof maka n'èzí eji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. LED HighBay Light 150W bụ ọhụụ mara mma. Obere na ibu na ibu,...
150W LED IP65 UFO Highbay 1. 5000K 150W ufo mere ka ọkụ na -ejikarị eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ogige ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. UFO LED High Bay Light with Bracket is new elegant design. Obere na ibu na ibu, ogologo oge...
150W UFO High Bay Lighting 5000K 1. 150W ada oke mmiri UFO ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Alibaba na-eburu ìhè dị elu na-achacha ọhụrụ. Obere na ibu na ibu, ogologo oge...
100W 5000K UFO High Bay Lighting 1. 100W ada nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri Australia ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. 100W ufo highbay alibaba IP65 waterproof maka n'èzí eji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. na-eme ka ihe nkedo ọkụ dị mma bụ ihe...
Ufo High Bay Lighting Ufo High Bay Light UFO High Bay Lighting Ufo High Bay Lighting 100w Rab High Bay Lighting Ufo Highbay Light 150w High Bay Lighting UFO High Bay Light